एक दशकअघि यस्तै अभियान भारतका विभिन्न राज्यमा गरिएको थियोर । भारतकै हुबहु कार्यक्रम नेपालमा पनि लागू गरिएको हो । यो कार्यक्रम सराहनीय रहे पनि फितलो कार्यान्वयन पक्षका कारण निष्प्रभावी भएको हो ।
संवाद र वार्तामार्फत नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध रहनेगरी सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने निर्णायक भूमिकामा नेपालका सरोकारवाला सबै लाग्नु आवश्यक छ ।
प्रदेश २ मा सयौं धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल रहेकाले यस्तो अभियानले यसलाई देशबाहिरका पर्यटकसँग जोड्न मद्दत पुग्नेछ । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेशमा पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न नसकेकाले सोचे अनुरूप यसको फाइदा उठाउन नसकिएकै हो ।
कृषिउपज वस्तुहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने, आन्तरिक पर्यटनलाई कसरी बढाउने, प्रचारप्रसार कसरी गर्ने र त्यसै अवसरमा उत्सव गरेर भोगचलन भन्ने प्रचलनको हिसावले मधेशमा चाडपर्वहरू आएका छन् ।
महरा र आलम अपराधजन्य घटनामा आरोपित हुनु भनेको संसद् मात्र होइन, पद्धतिकै निम्ति खेदपूर्ण क्रियाकलाप हो ।
वियोग र विछोडको अवस्थालाई संयोग र मिलनको अवस्थामा पुर्‍याउने र खराब प्रवृत्तिमाथि विजय प्राप्त गरी असल जीवनशैली अनुशरण गर्न प्रेरित गर्ने बडा दशैंको शुभ सन्देश सदा सर्वदा जीवनोपयोगी छ ।
मधेशी दलका नेताहरू मधेशले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार अथ्र्याएर मधेशी जनतामा भ्रम छर्ने गरेकाले मधेशी जनतामा अहिले मतभेद फैलिँदो छ । अहिले अस्तित्वमा रहेका मधेशी दलबाटै केही नेताहरू विगतमा मन्त्री भएका हुन् ।
संविधान स्वीकार्यताको प्रश्न (सम्पादकीय)
कुन संविधान दिवसलाई सम्पूर्ण देशले गौरवका साथ राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन सक्दैनन ? संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन वातावरण तयार पारिदने दायित्व कसको ?
“पेट्रो” सम्बन्ध (सम्पादकीय)
दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल र भारतबीच सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक हो । यसले दुई देशको सम्बन्धलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउने छ ।
चिनियाँ चोरहरू (सम्पादकीय)
नेपालको बैंकिङ्ग सुरक्षा कमजोर देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रणालीमा नेपालको विश्वासमा समेत कमी आउने जोखिम रहेको छ ।
प्रदेश २ को भाषा (सम्पादकीय)
प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यसमक्ष यसको वैशिष्टतालाई कसरी कायम राख्ने गहन जिम्मेवारी काँधमा छ । प्रदेशसभाका गतिविधिलाई अवसर र चुनौतीका रूपमा लिनु आवश्यक छ ।
सरकारबारे उपेन्द्रको सकस (सम्पादकीय)
उनले संविधान पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने पनि आवाज उठाएका थिए । तर एकाएक उनको आवाज फेरियो र संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा सहभागी भए ।
आजको दिनमा सीताराम विवाह, भगवान बुद्धको पवित्र भूमिको नाता र नेपालमा लोकतन्त्रका लागि लडेका नेपाली नेताले भारतीय स्वतन्त्रताका लागि गरेको संघर्षले खुल्ला सीमाको स्वतन्त्रता उपयोग गरेका नेपाल र भारतका जनताले भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा पनि गौरव गर्ने दिन हो ।
मधेशी नेतृत्वको असंवेदनशीलताले मधेशका जनता आफूलाई कमजोर ठानिरहेको छन् । मधेशी नेताहरू जता गयो उतै बिक्ने गरेका छन् । मधेशको सामाजिक, आर्थिक विकास बोक्ने राजनीति नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
सुरूदेखि राजपा र समाजवादीबीच एकीकरणका लागि प्रयास भएको हो तर नेतृत्वको लालसा र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । यदि एकीकरण भएन भने त्यो व्यक्तिवादी सोचका कारण नभएको बुझ्दा हुन्छ ।
प्रदेश सरकार र राज्य सञ्चालकमा जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चेत पलाउन सकेको छैन । प्रदेशको गृह मन्त्रालयले विपद् आउन नदिन जोखिमयुक्त ठाउँलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यका अरू संयन्त्रसँग किन समन्वय गर्न सक्दैन ?
मधेशको भोटबाट काठमाडौंको राजनीतिमा रमाएका मधेशी नेताहरू पनि पीडितको घर दैलोमा जान चाहेनन । उनीहरू बाढी पीडितका लागि सहयोग गर्न अगाडि आउन सकेनन । मन्त्री–नेताहरूको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा लर्को रहे पनि पीडितहरू भने राहत र पुनःस्थापना कुरिरहेका छन्र ।
राजनीति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्ने सशक्त माध्यम हुन नसक्नाका कारण नै यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि झन् ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको हो ।
जनता काठमाडौंसँग अधिकार खोज्नुका साथसाथै यिनीहरूसँग पनि आजित छन् । मधेशमा भए गरेका कुशासनप्रति मौन बसी फगत काठमाडौंलाई गाली गरेर मात्रै मधेशमा ताली खाने स्थिति अब छैन ।
संविधान संशोधनको मुद्दा (सम्पादकीय)
लोकतन्त्र प्राप्तिको लामो र चरण–चरणको संघर्षले लोकतन्त्रस“गै गणतन्त्र र संघीयतासमेत ल्याइदिएपछि संघीयता कार्यान्वयन सहज बन्न सकिरहेको छैन ।
संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश २ सरकारले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा नरहेको देखिएको थियो ।
मधेश आँपको राजधानी पनि हो । मधेशका सबै जिल्लामा आँप उत्पादन हुन्छ तर बजार पाउँदैन । फलतः नेपाली बजारमा विदेशी आँपको बिगबिगी रहन्छ ।
क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएको भारतले यसका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने छ ।